What is Local SEO? (Local SEO ဆိုတာဘာလဲ?) | yathar Magazine
Local SEO ဆိုတာ Search Engine Optimization (SEO) နည်းဗျူဟာဖြစ်ပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို Google map တွင် အလွယ်တကူ မြင်နိုင် ၊ ရှာတွေ့နိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
တည်နေရာရှိတဲ့ မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို Local SEO သုံးပြီး အကျိူးအမြတ်ရနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းသည် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်တွေ ကိုပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းထားပြီး Google search result မှာပေါ်သောအချက်များ (map pack ဟုလည်းခေါ်သည်) ကို လုပ်ငန်းအတွက် အ‌ရေးကြီးသော keywords များဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါက Local SEO က လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် အထောက်ကူပြုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် Local SEO ကိုနားလည်ချင်လျှင်တော့ Google ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ ပထမဆုံးအနေနှင့် သိရန်လိုအပ်ပါတယ်။
Search Engines တွေဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာလဲ?
Internet စစပေါ်ချင်းတုန်းက website အနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှာရတာလွယ်ကူတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ Internet စတင်ကျယ်ပြန့်လာပေမဲ့ users တွေအတွက် sites တွေကို ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရအောင် search engine ကိုဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဥပမာ search engine မှာ စကားစုတစ်ခု ရိုက်တယ်ဆိုရင် ၎င်းစကားစုမှာပါတဲ့ keyword နဲ့ တူညီတဲ့ websites ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
Google လည်းထိုနည်းတူပဲ ၊ ဒါပေမယ့် Google က ဘယ် Website တွေကို ယုံကြည်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသဖို့အတွက် ဆိုက်များကြား လင့်ခ်များကို အသုံးပြုထားတဲ့ ပထမဆုံး search engine ဖြစ်လို့ တခြား search engine တွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
လက်ရှိမှာ Google က website အတွင်းရော အပြင်ဘက်ပါ ရာနှင့်ချီတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှာ ပြသဖို့ သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်တဲ့ အချက်တွေက “ Digital Footprint” ကို ဖြစ်လာစေပြီးတော့ အချက်တစ်ခုစီက မတူညီတဲ့ တန်ဖိုးတွေ ရှိပြီးတော့ search engine တွေက ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာစေဖို့ ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။
သင့် Digital Footprint က Google ထဲကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့် User ရဲ့ ရှာဖွေမှု အတွက် အကောင်းဆုံးသော Result ဟုတ်မဟုတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်။
Google မှ ရှာဖွေမှုရလဒ်များကို အဆင့်သတ်မှတ်ပုံ
Google က website ရာနှင့်ချီ (သို့မဟုတ်) ထောင်ပေါင်းများစွာကို လျင်မြန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို algorithms လို့ခေါ်တယ်။
ဥပမာ တစ်ခုခုကို google တွင် ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါ algorithm က အညွှန်းကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ organic ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှာ သင့်ရှာဖွေမှုနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ websites lists ကို ပြန်ပေးပါတယ်။
Open link ကနေပေးတဲ့ ဆက်စပ်မှု နှင့် လူကြိုက်များမှု အပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ရလဒ်များကို ရွေးချယ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
သင့်ရှာဖွေမှုမှာ ပါဝင်တဲ့ Website တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ algorithm က siteအတွင်း နဲ့ site ပြင်ပ အချက်အမျိုးမျိုးကို စစ်ဆေးသည်။
သက်ဆိုင်တဲ့ sites များအားလုံးကို list တွင် ထည့်သွင်းပြီး Popularity ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
Site အတွင်း နှင့် site ပြင်ပ အကြောင်းအရင်း အမျိုးမျိုးကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘယ် site တွေက Search Result ကို အကောင်းဆုံး ဖော်ပြနိုင်လည်းဆိုတာကို အယ်လဂိုရီသမ်က ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး အဆိုပါ site များကို Search Result ၏ ထိပ်ပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။
သင့်ရဲ့ SEO ကို မြှင့်တင်ခြင်းက သင့်websiteရဲ့ ဆက်စပ်မှု၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုနဲ့ link ရေပန်းစားမှုဆိုင်ရာ အချက်နှစ်ရပ်စလုံးကို သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
သင့် siteရဲ့ footprint က မှန်ကန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားပါက၊ သင့် site သည် ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင် ပိုမိုပြီး Rating ကောင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
Local SEO၏ မတူညီသောပုံစံ
Local organic searchရလဒ်တွေကရော ဘယ်လိုလဲ??
သန်းပေါင်းများစွာသော users တွေရဲ့ Search Request ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီးနောက်၊
users တွေက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်ခုကို ရှာချင်လျှင် ချက်ချင်း Result တွေကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း Google မှ သိရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်၊ Google ရဲ့ local search algorithm တွင် proximity factor တစ်ခု ပါဝင်သည်။
ဤသည်မှာ ဒေသတွင်း Keywords များ (ဒေသခံ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် စုံစမ်းမှုများ) ကိုရှာဖွေသောအခါ Google သည် သင့်တည်နေရာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းပြသရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ရှာဖွေသူသည် Search Request တွင် မြို့အမည် (သို့မဟုတ်) Near By Loaction မပါဝင်သော်လည်း local search algorithm က ထည့်သွင်း ရှာဖွေပေးသည် ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် အလုပ်တွင် နေ့လည်စာအတွက် ပီဇာမှာယူချင်ပါက ၊
“ pizza delivery” အတွက် google မှနေ တဆင့် သင့်ရုံးအနီးရှိ Pizza Shop တည်နေရာစာရင်းကို သင်၏ local Search Engine Results Page (SERPS) တွင် ပေါ်လာပါမည်။
သို့သော် အိမ်တွင် ထိုနည်းတူ တူညီသောရှာဖွေမှုကို သင်ပြုလုပ်ပါက၊ သင်သည် လုံးဝကွဲပြားသောရလဒ်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Local Search သည် နှစ်အတော်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ကွန်ပြူတာများတွင်သာ အသုံးပြုသောကြောင့် Users များ အနေဖြင့် အကန့်အသတ်ရှိသည်။
သို့သော်၊ မကြာသေးမီက မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ၊ မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုများ တိုးပွားလာကာ Local SEO သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဒေသတွင်းဈေးကွက်ရှာဖွေသူများ၏ အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးပါသည့် ဒေသဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသည် ။
သားငါးတွေကို ကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုသိမ်းမလဲ